Mayelana Nathi - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
I-Guangdong Shengte Electric Co., Ltd. yasungulwa ngo-January 19, 2011. Itholakala ku-High-tech Zone, iDolobha laseDanzao, isifunda saseNanhai, iDolobha laseFoshan, elinokuhamba okulula nendawo enhle.Siyibhizinisi elisungulayo eligxile ekusabalaliseni amandla aluhlaza, ukonga amandla kanye nokuvikelwa kwemvelo.
Sisebenza ngokukhethekile ku-R&D, ukukhiqizwa nokudayiswa kweziguquli zamandla kanye neziguquli zohlobo olomile.Ithimba elisebenzayo le-shengte elinobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokukhiqiza nokucubungula, ukuklama kobuchwepheshe, ukukhiqizwa ngokucophelela komkhiqizo ngamunye.Ngesikhathi esifanayo amunca isipiliyoni esicebile ekuhlolweni, ukuze izinga lemikhiqizo liqinisekiswe.
Futhi inezinga eliphezulu lethimba lesayensi nobuchwepheshe, abasebenzi abangaphezu kwe-100, phakathi kwabo kukhona izisebenzi zezobuchwepheshe ezingaphezu kwama-20 eziphezulu naphakathi.Isifiso sokuqala sokusungulwa kwebhizinisi ukudala imikhiqizo yezinga lokuqala, ikhwalithi enhle kakhulu, ubuqotho bamabhizinisi amahle, manje umsunguli wesifiso sokuba indawo.
Sinemishini ephelele yokukhiqiza neyokucubungula, ukuhlola okuphelele nezindlela zokubona.Njengoba ineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni sokukhiqiza kanye nesisekelo esiqinile nesisekelo sobuchwepheshe, inkampani inendawo yokwakha engamamitha-skwele ayi-12,000.Le nkampani isithuthuke ezingeni lamazwe ngamazwe le-vacuum, okokusebenza okuphakathi kokusonta, okokusebenza kwamakhoyili, okokuhlola okuzenzakalelayo.
Ukwaneliseka kwekhasimende kuwukuphela kwendlela yethu, kuzosebenza ngomklamo, ukukhiqiza, insizakalo yangemva kokuthengisa esigabeni ngasinye.Kuphela uma amakhasimende enelisekile ngemikhiqizo yami, ukuze sibe abawinile abavamile emphakathini.Ubumbano lwenzuzo yomphakathi kanye nenzuzo yebhizinisi umgomo wokuphatha wenkampani.Bonke abasebenzi benkampani ngokuqinile, ukuzinikela, ubuqotho, ikhodi yokuziphatha yenkonzo, bazimisele ukusungula nokugcina ukubambisana okuseduze namakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.Samukela bonke abangani abahlanganisa abasha nabadala abazovakashelwa ngobuqotho.
Emkhakheni wokusabalalisa amandla aluhlaza, inkampani inikeza izixazululo ezididiyelwe zokuhambisa amandla kagesi, kanye nemikhiqizo emisha yezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisekelayo eziphezulu, ngokusho kwenethiwekhi yokusabalalisa amandla asemadolobheni, ukuguqulwa kwegridi yamandla asemaphandleni, ukusetshenziswa kwamandla edolobhaneni lasemadolobheni, ukongiwa kwamandla okubanzi ukusetshenziswa kwamandla ezimbonini, iphrojekthi yokonga amandla emisha, njll.
Ngokuhamba kweminyaka, imikhiqizo yethu ikakhulukazi njengalokhu: i-transformer ecwiliswe ngamafutha i-S11, i-S13, i-epoxy resin casting transformer eyomile i-SCB10, i-SCB11, phakathi kwayo i-SCB11 iyi-transformer evulekile.Kukhona uhlobo oluhlanganisiwe ( lwaseMelika) i-transformer, efakwe ngaphambili (yaseYurophu) i-substation kanye ne-voltage ephezulu nephansi iqedela imishini kagesi nokunye.